Udume njengemali umfana (13) okhanda izimoto - Ilanga News
Home Izindaba Udume njengemali umfana (13) okhanda izimoto
Udume njengemali umfana (13) okhanda izimoto
Uyise uthi wayibona iseneminyaka emithathu indodana yakhe ukuthi inesiphiwo
UKHAMBA lufuze imbiza kowesilisa waseCottonlands, eVerulam nendodana yakhe egqugquzelwe wukubona uyise ewa evuka ondla umndeni ngemali ayithola ngokukhanda izimoto, nayo yafunda ukwenza lo msebenzi osuyiphendule isilomo endaweni.
USiphesihle Gcabashe (13), owenza uGrade 6 eCottonlands Primary School, kubikwa ukuthi ugila izimanga ngokukhanda izimoto ezindaweni ezahlukene njengoba kuthiwa ulandwa ngisho kubo ngabantu abasuke befuna usizo ngezimoto zabo.
NgoLwesibili ILANGA lihambele umndeni wakwaGcabashe lapho lo mfanyana esebenzela khona limfice ematasa nenjini yemoto kanti ubelindwe ngowesilisa wa-endaweni noyise abezohamba nabo beya eRichards Bay, lapho kuthiwa ubelindwe ngenye imoto enenkinga yenjini.
Ingxoxo yeLANGA noSiphesihle ibilokhu iphazanyiswa yizingcingo ebezingena kumakhalekhukhwini awusebenzisa noyise, kushaya abantu befuna yena, abanye behlela ukuletha izimoto zabo kuyena.
Ekhuluma neLANGA, ngemvume kayise, uMnu Edward Gcabashe, uthe into emenze waba nothando lokukhanda izimoto, wukubona ukusweleka kwemisebenzi njengoba noyise engasebenzi kodwa wabakhulisa ngemali ayithola ngokukhanda izimoto.
Uthi ufisa ukuthi uma eqeda isikole, enze izifundo eziphathelene nokuba ngumakhenikha ngoba uyazifela ngakho.
“Into eyenza ngifune ukwenza izifundo zokuba ngumakhenikha, wukuthi ngisho ngingangawuthola umsebenzi, ngizokwazi ukuzivulela indawo yami ngizisebenze mina. Ngisho ubaba akasebenzi, kodwa ukwazile ukusikhulisa nezingane zakithi. Kuyisifiso sami ukuthi nami ngiqhubeke nokuletha isinkwa ekhaya ngokusebenzisa ikhono lami,” kusho yena.
UMnu Andile Ndlovu obesegcekeni eyolungisa imoto, uthe akasahlupheki njengoba kukhona uSiphesihle. Uthi umsebenzi wakhe muhle kakhulu, yingakho uma enenkinga, imoto yakhe ilungiswa nguSiphesi-hle.
“Muhle umsebenzi wakhe, indlela engimethemba ngayo, ngiyaye ngiyalele nabanye abafuna ukulungiselwa izimoto,” kusho yena.
UMnu Gcabashe uthe wabona indodana yakhe iseneminyaka emithathu izelwe ukuthi inentshisekelo yokukhanda izimoto.
“USiphesihle uyingane yesi-10 kweziwu-12 enginazo. Bekuthi njalo uma ngikhanda, ahlale eduze kwami, angibuke. Bengibuye ngimthume nezipanela. Kuhambe isikhathi waqala ngokucela ukungiqaqela injini uma kunemoto efikile ezolungiswa.
“Ubekwenza lokhu ngimbuka futhi akwenze ngendlela, uqhubekile wagcina esekwazi ngisho ukuyibuyisela yonke injini. Kulaphoke efunde khona konke ngemoto oku-hlanganisa nokuyikhanda.
“Ngangenwa wukugula nomlenze wami ungasekho kahle, uSiphesihle waqhubeka nomsebenzi. Manje sengikwazi nokumshiya egcekeni ngiyosebenza kwenye indawo, yena ayikhande imoto eyedwa ngifike eseqedile. Ngikhuluma nje, usenamakilayenti akhe afika lapha egce-keni afune yena.
“Kokunye siyaphuma si-bizwe ezindawe-ni ezahlukene siyokhanda khona. Kuma-nje nje, uma eqeda le moto sibhekisa amabombo eRichards Bay, nakhona uyokhanda imoto. Umnikazi wayo uthe inenkinga yenjiini,” kusho uMnu Gcabashe.
Uthi indodana yakhe isiyenze walula umsebenzi wakhe.
“Uma esekhokhelwe ngomsebenzi wakhe, imali siyayihlanganisa sithenge ukudla
endlini, abuye acele ukuba ngimthengele okokugqoka asuke ekufuna ngaleso sikha-thi,” kuphetha yise.
Previous article“Ushaywe ngesagila” bechitha ikhansela ebeliphakanyiswa
Next articleInjabulo koweChiefs ebuyelwa yifomu